Rep Power 10 ကျနော့်မှာ ဖြစ်တဲ့ပုံစံ နဲ့တပုံစံထဲပါဘဲ ....
ကျနော့်မှာ ပေါ်တဲ့ပုံလေးကတော့ အားလုံးကိုလေးစားခင်မင်လျက်
Reply With Quote The Following4Users Say Thank You to chit tee For This Useful Post:
Dragon Warrior, phoelapyae, William Paul, ကိုထွန်း 01-02-2012 11:06 AM
Rep Power9ဒီနေ့ နေ့ခင်းတနာရီမှာ၊ အိပ်ယာကနိုးနိုးခြင်းဝင်ကြည့်လိုက်တော့၊ ဝင်လို့ရသွားပါတယ်။ နေ့ခင်းတနာရီမှာ၊ အိပ်ယာကနိုးနိုးခြင်း ဆိုလို့ နေ့နဲ့ညလွဲနေတဲ့ ကိုထွန်းလို့ မထင်ကြပါနဲ့။ မနေ့က ညီမ အိမ်မှာလုပ်တဲ့ gathering party ကိုသွားရင်း၊ အရှိန်နည်းနေသေးသမို့၊ အိမ်အပြန် ဝိုင် (၂) လုံးထောင်ပြီး ဇနီးရယ်၊ အလည်လာတဲ့ ရန်ကုန်က အမရယ်၊ တူမရယ်နဲ့ ဆက်ဝိုင်းလိုက်တာ၊ မနက် (၂) နာရီထိုးသွားလို့ပါ။ ဖိုရမ်ထဲဝင်လို့မရလို့ အကြံပေးကြတဲ့ အကိုဆွေ၊ ဆရာချစ်၊ ညီမ မအေရာ၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုလိပ်ကြီးနဲ့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး၊ ကူညီပေးတဲ့ ကိုချင်းတွင်းသားတို့ကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Last edited by ကိုထွန်း; 01-02-2012 at 06:28 PM.
Reply With Quote The Following9Users Say Thank You to ကိုထွန်း For This Useful Post:
AndrewSway, chit tee, Dragon Warrior, skhaung, tunaungkyaw, William Paul, ချင်းတွင်းသား, လိပ်ကြီး, အေ၇ာ 01-03-2012 12:28 AM
Rep Power 10 အဲဒါ ကျနော်လည်း အရင်ကဖြစ်တယ် ... အခုတော့ ပြန်အဆင်ပြေနေပြန်ပြီ ... ဘာကြောင့်လဲ မသိဘူး ... ကိုထွန်းလည်း ဖြစ်နေတယ် မှတ်တယ် ... Browser ကြောင့်များလားလို့ ... Google chrome နဲ့ လုံးဝ ဝင်လို့မရဘူးဗျာ ... အဲဒါနဲ့ Firefox နဲ့ ဝင်ကြည့်တော့ ရတယ် ... အဲလိုရပြီး Google chrome နဲ့ ပြန်ဝင်တော့ အခုထိတော့ ရနေတယ် ... ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိဘူး ...
ဖိုးပြည့်တို့ရေ ... ရှင်းပါဦး ... အတော်များများ ဖြစ်နေကြတယ် ... မရှင်းရင်တော့ မိန်းမယူဖို့ စိတ်မကူးနဲ့ ... သူခိုင်းရင်ပျော် သူကခေါ်ရင် ကြယ်စင်တတင်း ငွေလမင်းနဲ့ ဆောင်ကြဉ်းလို့သာ အရောက်လာမယ် ....
Reply With Quote The Following7Users Say Thank You to HarryLwin For This Useful Post:
chit tee, Dragon Warrior, phoelapyae, William Paul, ကိုထွန်း, ချင်းတွင်းသား, လိပ်ကြီး 01-03-2012 02:59 PM
Location မြေကမ္ဘာ တစ်နေရာပေါ့ ( အတည်တကျ မရှိခြင်းပါ)
Posts 144	Thanks 310
Rep Power 8 ကျွန်တော်လဲ အခု မဖြစ်တော့ပြန်ဘူးဗျ၊ သုံးတာကတော့ ဒီစက် ၂လုံးပဲ၊ အေရာပြောသလို သွားလေရာယူသွားရတဲ့ စက်နဲ့၊ ခုံပေါ်မှာ အခန့်သား ထိုင်နေတဲ့ စက်တွေပေါ့၊ မရချင်ရင် ဘယ်လိုမှ မ၇ဘူး၊ အဲ android phone တောင်ပါလိုက်သေး၊ အခုရတဲ့အခါတော့ ဘာနဲ့သုံးသုံး၊ ဘယ်စက်နဲ့ သုံးသုံး ရပြန်ရော
Reply With Quote The Following 8 Users Say Thank You to skhaung For This Useful Post:
chit tee, Dragon Warrior, phoelapyae, tunaungkyaw, William Paul, ကိုထွန်း, လိပ်ကြီး, အေ၇ာ 03-19-2012 12:48 PM
Posts 1	Thanks 15
Rep Power0ကျွန်တော်ကိုလည်း ကူညီပေးပါဦး။ ကျွန်တော် အရင်က nyeininnthar နာမည်နဲ့ ဝင်ခဲ့ပြီး နောက်တော့ ကိုအင်းသား ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းသုံးခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ပြောင်းပြီးတော့ အင်တာနက်သိပ် မကိုင်ဖြစ်ဘူး။ နည်းနည်းတော့ သုံးလိုက်ပါသေးတယ်။ မကိုင်ဖြစ်တာ ကြာတော့ passward လည်းမမှတ်မိတော့ဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ အရင်ပေးထားတဲ့ email address ကလည်း သုံးမရတော့ဘူး။ အဲဒါ email အသစ်ဖွင့်လိုက်ရတယ် ဆိုပါတော့။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်မှာ အသစ် အသစ်တွေနဲ့ ဘဲလုံးပန်း နေရတယ်။ အခု အကူအညီတောင်း ရတာက အရင် ကိုအင်းသား နာမည်နဲ့ ဝင်လို့ ရသေးလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရမလဲ သိချင်လို့ ပါ။ ပြောင်လိုက်တဲ့ email account က snowsunyein@gmail.com ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to nyeininnthartgi For This Useful Post:
Dragon Warrior, ကိုထွန်း, သိုးကျောင်းသား 03-21-2012 07:50 AM
Rep Power 10 အရင် username - ကိုအင်းသား နာမည်နဲ့ ပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
Dragon Warrior, ကိုထွန်း, ချင်းတွင်းသား 03-12-2013 12:16 PM
Rep Power9ဖိုရမ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဝင်လို့မရတဲ့ အကြောင်ရင်းထဲက တစ်ခုကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ server စက်ထိုင်ပြီးထားလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ နောက်သူတို့က bandwidth သက်သာစေဖို့ server ကနေ cache ယူထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာကျနော်တို့ ဖိုရမ်လို community site တွေအတွက် ပြဿနာတက်ပါတော့တယ်။ ကျနော်ရုံးက server ထိုင်ထားတော့ အဲဒီပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ server က cache ကိုပြန်ရှင်းထုတ်လိုက်ရင်တော့ ပြန်အဆင်ပြေသွားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဖိုရမ်ရဲ့ Home Page ကိုတော့ cache ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကို ပြပေးပါတယ်။ log in ဝင်လိုက်တော့မှ ပြဿနာတက်တာပါ။ ကျနော်ဆီမှာတော့ network error ဆိုပြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော့်အတွေ့အကြုံကိုပြောပြတာပါ။
Reply With Quote The Following5Users Say Thank You to tunaungkyaw For This Useful Post:
phoelapyae, William Paul, ကိုထွန်း, ချင်းတွင်းသား, သိုးကျောင်းသား + Reply to Thread